Kireynta Kireynta TV-yada Noocyada | Martech Zone
Kireynta Kireynta TV-yada
Ku soo jiidashada macaamiisha cusub iyada oo la hagaajinayo sawirka guud ee astaanta ayaa caqabad joogto ah ku ah suuqleyda. Iyada oo leh muuqaal warbaahin kala jaban iyo carqaladeynta baaritaanka badan, way adagtahay in lala qabsado rabitaanka macaamiisha farriinta la beegsanayo. Suuqleyda ay la soo gudboonaatay caqabadan ayaa badiyaa u jeesata “darbiga ku tuura si ay u arkaan haddii ay ku dhegan tahay” iyo in kale, halkii ay ka ahaan lahayd istiraatiijiyad aad loo sii qorsheeyay.
Qeyb ka mid ah istiraatiijiyaddan waa inay weli ku jirtaa ololeyaasha xayeysiinta TV-ga, oo sii wadaysa inay isku caddeyso inay tahay mid dhexdhexaad ah oo iibin kara wax soo saarka isla markaana siin kara sumcado sumcad kobcin. TV-ga ayaa wali ah mid khuseeya xitaa waqtiyadan kala daadsan, iyo suuqleyda caqliga badan ayaa si istiraatiijiyad leh ugu weecanaya TV-ga si ay u gaaraan yoolal iyo cabirro badan.
Qeexida "Qaadista Sumadda"
Macnaha guud ee mawduucan, "brand lift" waa koror togan oo ku saabsan sida dhagaystayaashu u arkaan shirkad iyo inta jeer ee ay ka fikiraan - cabbir ah "dhegdheg." Baahida wiishkan ayaa muhiim u ah noocyo badan, gaar ahaan kuwa sameeya guryaha iyo shirkadaha kale ee soo saara khadadka ballaadhan ee alaabada isku xidhan. Suuqleyda shirkadahaan waxay ubaahan yihiin dammaanad qaad in ololeyaashu aysan kaliya kobcinaynin iibinta "Product XYZ" laakiin sidoo kale waxay siinayaan dhagaystayaasha dareen wanaagsan oo ku saabsan astaanta lafteeda iyo alaabteeda kale. Maaddaama ay suuqyayaashu ballaadhiyaan diiradooda iyo cabbiraadaha ka dambeeya kordhinta iibinta hal shey oo keliya, waxay si fiican u qiyaasi karaan ROI-ga dhabta ah iyo saamaynta ololaha. Oo ku hubaysan macluumaadkan waxay markaa si firfircoon u hagaajin karaan hal-abuurka ololaha mustaqbalka iyo meelaynta si ay si fiican ugu kordhiyaan cabbiraadaha kor u qaadista sumadda.
Isticmaalka Kordhinta ee Metric Lift Brand
In kasta oo dhaqan ahaan looga adeegsaday TV-ga dhexdiisa, "wiishka wiishka" ayaa hadda galaya gudaha fiidiyowga dijitaalka ah. Nielsen ayaa dhowaan soo saartay Saamaynta Dijitaalka ah ee lagu cabbiro "kor u qaadista astaanta iyadoo lagu cabbirayo meerisyo" taas oo sida ay shirkaddu ku bixinayso warbixinno ka kooban halbeegga xayeysiiska maadaama ay la xiriirto waxqabadka goobta. Aleck Schleider ayaa ku qoray Ku Laabashada Aasaaska: Maxay Tahay Sababtoo ah Qiyaasta Nooca Nooca Nooca Nooca ah Marnaba Uga Bixi Doonin Fashion-ka in:
Suuqa maanta, helitaanka macaamil si ay wax u iibsadaan ma fududa, laakiin xaaladaha badankood waxay had iyo jeer ku bilaaban doontaa kor u qaadista wacyiga badeecada, taas oo - ugu dambeyntiina iyadoo loo marayo soo noqnoqoshada iyo farriinta - ay ujeeddo waddo.
Waxa uu kor u qaadayaa barta ah in wacyigelinta calaamaddu ay tahay inay noqoto himilada koowaad waxay noqoneysaa darawalka dambe ee wax iibsiga.
Suuqyayaashu waa inay ku hagaajiyaan hal-abuurnimadooda TV-ga inay ku daraan nuxurka guud ee sumcadda, halkaasoo farriinta looga hadlayo mudnaanta / faa'iidooyinka / gaar ahaanta / sharafnimada astaanta iyo sidoo kale faa'iidooyinka wax soo saarka. Gaar ahaan suuqleyda iibineysa badeecooyin kala duwan, ma ahan inay diirada saaraan kaliya hal xariiq iyagoon sidoo kale ka hadlin soo jeedinta astaanta aasaasiga ah.
Soo bandhigida TV
Caqabada ayaa ah cabirku wuxuu kuxiranyahay dareenka iyo aragtida dhagaystayaasha. Waxay sidoo kale cabbiraysaa ujeedooyinka iyo dareenka, tusaale ahaan sida ay macquul ugu tahay macaamilku inuu kula taliyo alaabta kuwa kale, iyo sidee taasi u saameyneysaa sumcadda ballaaran iyo iibka tooska ah. TV-ga ayaa halkan ka ciyaara maxaa yeelay waa habka ugu fiican ee loo dhaqaajin karo suuq-geyntii wax soo saar ee hore isla markaana loo soo saari lahaa wiish guud. Suuqleyda ayaa had iyo jeer loo xilsaaray inay saameyn ku yeeshaan iibka iyada oo loo marayo dhammaan kanaalada, iyo TV-ga ayaa bixiya hab lagu wanaajiyo dhammaan kanaalladan iyada oo loo marayo nuxurka la beegsanayo iyo sumadda hal-abuurka.
Ololayaasha ku saleysan TV-ga oo leh hal abuur xoog leh oo saameyn leh iyo isku dhafka warbaahinta saxda ah ayaa yeelan kara meel dheer. Kaliya saameyn kuma yeelan karaan badeecadaha la xayeysiinayo laakiin sidoo kale waxay abuuri karaan xiisaha alaabooyinka aan hadda lagu soo bandhigin wax ololeyaal hal-abuur ama mid warbaahineed ah waxayna ku tiirsan yihiin oo keliya dadaalada diiradda saaraya.
Asal ahaan, macaamiisha ayaa ka jawaabaya hal-abuur loogu talagalay hal shey oo lagu calaamadeeyay tafaariiqleyaal gaar ah. Laakiin, waxay ku hawlan yihiin suuqgeyn dhammaan alaabada dhammaan tafaariiqleyda sumadda leh. George Leon, Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare ee Warbaahinta iyo Maareynta Xisaabaadka ee Hawthorne Direct
Dhacdadani waxay hoosta ka xarriiqeysaa baahida loo qabo hal-abuurnimo iyo farriin weyn oo had iyo jeer ku soo bandhigta sumadda qaab firfircoon oo lagu kalsoonaan karo. Suuqyayaashu waa inay sahamiyaan baaritaanka A / B oo ay la socdaan hal-abuurnimo hal-abuur leh marka la barbar dhigo riixitaanka sumcadda ballaaran ka dibna isbarbar dhiga natiijooyinka si waafaqsan.
Tixgeli khadka wax soo saarka qalabka ee laga bilaabay Lowe's, The Home Depot, iyo Menards. Cabbiraadda ololaha iibinta tafaariiqda, aan u qaadanno inay u dhigantaa 8: 1 saamiga waxtarka warbaahinta (MER) iyo wax soo saarka ololuhu wuxuu lahaa in ka badan 350 unug halkii Target Ratings Point. Sidoo kale, kor u qaadista iibka calaamadaha alaabooyinka aan lagu soo bandhigin hal-abuurka ayaa waxaa kor u kacay 200 + qaybood oo dheeri ah halkii TRP. Macnaha guud, TRP waxaa lagu qeexaa boqolkiiba 1 ee dhagaystayaasha la bartilmaameedsaday (ma ahan wadarta dhagaystayaasha) ee lagu gaaro xayeysiinta, waana metrik inaga caawinaya inaan fahamno saameynta dhabta ah ee xayeysiinta TV-ga. Tusaalaha, waxaa jira kor u qaadis ku saabsan alaabooyinka aan la xayeysiin oo ah nooc ka mid ah ololeyaasha TV-ga ee sida wanaagsan loo fuliyay.
Maaddaama suuqleyda ay sii wadaan qorsheynta istiraatiijiyadooda warbaahinta ee 2017, waa inaysan iska indhatirin ololayaasha TV-ga. In kasta oo kanaalada fiidiyowga dhijitaalka ahi dabcan muhiim u yihiin macaamiisha ku saleysan moobiilka, xayeysiisyada TV-ga istiraatiijiga ah ee leh isku-darka saxda ah ee warbaahinta iyo soo noqnoqodka ayaa ku wadi kara iibka waxayna ku siin karaan astaanta lafteeda faa'iido faa'iido leh.
Tags: Aleck Schleiderwiish qaadidqiyaasta wiishka wax lagu qaadolowe waasaamiga waxtarka warbaahintaMenardsbakhaarka guriga
Jessica Hawthorne-Castro, agaasimaha guud ee Hawthorne, ayaa si istaraatiijiyad leh u taagay wakaaladda safka hore ee kacaanka suuqgeynta cusub ee xayeysiinta halkaasoo farshaxanka uu kula kulmayo sayniska. Laga soo bilaabo hal-abuurka iyo wax-soo-saarka illaa warbaahinta iyo falanqaynta, Jessica waxaa ka go'an tayo sare iyo hal-abuurnimo dhammaan hayadaha kala duwan. Doorkeeda aasaasiga ah waxay ku lug leedahay kobcinta xiriirada macaamiisha muddada dheer si loo horumariyo ololeyaal xayeysiin istiraatiiji ah oo la qiyaasi karo, oo loogu talagalay in lagu kiciyo jawaab celinta macaamiisha isla markiiba.